အနှိမ်ခံနင်းပြားဘဝကနေ ကမ္ဘာကျော်မင်းသားဖြစ်လာသူ မော်ဂန် ဖရီးမန်း
23 May 2017 . 2:21 PM
ကမ္ဘာကျော်မင်းသားကြီး မော်ဂန် ဖရီးမန်း (Morgan Freeman) ရဲ့ ဘဝခရီးကြမ်း
မော်ဂန် ဖရီးမန်း (Morgan Freeman) ကို ၁၉၃၇ခုနှစ် ဇွန်လ (၁)ရက်နေ့မှာ တန်းနက်စ်(စ်)ပြည်နယ် (Tennessee) မန်းဖစ်(စ်)မြို့ (Memphis) မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ ဆံပင်ညှပ်ဆရာ မော်ဂန် ပေါ်တာဖီး ဖရီးမန်း (Morgan Porterfield Freeman) နဲ့ ကျောင်းဆရာမ မေမီ အက်ဒါ ဖရီးမန်း (Mayme Edna Freeman) တို့မှာ သားသမီး ၅ယောက်ရှိတဲ့အနက် မော်ဂန် ဖရီးမန်းကတော့ အငယ်ဆုံးသား ဖြစ်ပါတယ်။ အာဖရိကန်-အမေရိကန်ဖြစ်တဲ့ မိဘနှစ်ပါးဟာ မော်ဂန် ဖရီးမန်းမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာ လူဖြူလူမည်းခွဲခြားတဲ့ Jim Crow Laws ကြောင့် အလုပ်အကိုင်အဆင်မပြေတော့တာနဲ့ ချီကာဂိုပြည်နယ် (Chicago) နဲ့ မစ်စစ်စိပိပြည်နယ် (Mississippi) တွေမှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရပါတယ်။ မိဘတွေ တစ်နယ်တကျေးမှာ အလုပ်ရှာထွက်နေတုန်းမှာ မော်ဂန် ဖရီးမန်းဟာ အဖွားဖြစ်သူနဲ့ ချာလီစတန်မြို့ (Charleston) မှာကျန်ခဲ့ပါတယ်။ မော်ဂန် ဖရီးမန်း ၆နှစ်အရွယ်မှာ အဖွားဆုံးသွားပြီး မိခင်ဖြစ်သူမှာလည်း အရက်စွဲနေတဲ့ဖခင်နဲ့ အတူမနေတော့ပါဘူး။ သားအမိနှစ်ယောက်ဟာ ဂရင်းဝုဒ်မြို့ (Greenwood) မှာ အခြေချနေထိုင်ပြီး ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။
အနုပညာအလုပ်ကို ဝါသနာထုံလှတဲ့ မော်ဂန် ဖရီးမန်းဟာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ မုန့်ဖိုးတွေကို စုခဲ့ရပါတယ်။ သူနှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ မင်းသားတွေကတော့ ဂယ်ရီ ကော့ပါး ဘီ (Gary Cooper B) ၊ စမန်ဆာ ထရေစီ (Spencer Tracy) နဲ့ စစ်ဒနီ ပွိုက်တီးယား (Sidney Poitier) ဖြစ်ပြီး သူတို့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို မလွတ်တမ်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဗီဇက သရုပ်ဆောင်ဝါသနာရှိပေမယ့် အခွင့်အရေးမပေးတာကြောင့် အစွမ်းမပြခဲ့ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အစွမ်းပြဖို့အကြောင်းပေါ်လာတာလည်း ရယ်စရာတော့ ကောင်းပါသေးတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာ မော်ဂန် ဖရီးမန်းဟာ သူကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေး ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကုလားထိုင်ကို ဆွဲချမိတဲ့အတွက် အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ ကျောင်းတွင်းသရုပ်ဆောင်ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ အံသြစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲ ၁၂နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့ ဖရီးမန်းဟာ ပထမဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၅ခုနှစ် Broad Street High School ကနေ အထက်တန်းပညာပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဂျက်ဆင်စတိတ် တက္ကသိုလ် (Jackson State University) ကနေ ပညာသင်ဆုပေးခဲ့ပေမယ့် အမေရိကန်လေတပ် (United States Air Forces) ထဲကို ဝင်ရောက်သွားပြီး Automatic Tracking Radar Repairman အနေနဲ့ ၄နှစ်ကြာအောင် စစ်မှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။ သူတစ်ပါးအသက်ကို ပစ်ခတ်ရတဲ့အလုပ်ကို စိတ်မပါတော့ဘဲ စစ်တပ်ကနေ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၅၉ခုနှစ်မှာ ဟောလီးဝုဒ်မှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့ လော့စ် အိမ်းဂျလိစ်မြို့ (Los Angeles) ကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်ကို တက်အားသရွေ့လုပ်ပေမယ့် ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်မထင်ဖြစ်နေပြီး မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ထမင်းတစ်လုတ် စားဖို့ခက်ခဲလွန်းတဲ့အတွက် နယူးယောက်မြို့ကို ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အပြင် အိမ်းဂျလိစ်မြို့ကောလိပ် (Los Angeles City College) မှာ စာရေးနဲ့ 1964 New York World’s Fair မှာ အကသမား အလုပ်တွေကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ပြီး အစောပိုင်းရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း နာမည်ကျော်ကြားတာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။
၁၉၈၇ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးတဲ့ “Street Smart” ဇာတ်ကားမှာ ပရိသတ်လက်ခံလာပြီး အော်စကာဆုဆန်ကာတင် (Oscar Nomination) တောင် ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၉ခုနှစ် (၂၂နှ) စ်အရွယ်မှာ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုိ စတင်ခဲ့ပေမယ့် ဇာတ်လမ်းတွေမှာ မထင်မရှားပါဝင်ရာကနေ (၂၈) နှစ်ကြာတဲ့အချိန် ၁၉၈၇ခုနှစ် ၅ဝနှစ်အရွယ်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးလက်ခံလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ မော်ဂန် ဖရီးမန်းဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ကမ္ဘာကျော်မင်းသားဖြစ်ဖို့ နှစ်၃ဝလောက် ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက ယုံမှာလဲ။ ၁၉၈၉ခုနှစ်မှာ ဖြန့်ချိတဲ့ Glory ၊ ၁၉၉၁ခုနှစ်မှာ ဖြန့်ချိတဲ့ Robin Hood: Prince of Thieves ၊ ၁၉၉၄ခုနှစ်မှာ ဖြန့်ချိတဲ့ The Shawshank Redemption ၊ ၁၉၉၅ခုနှစ်မှာ ဖြန့်ချိတဲ့ Seven ၊ ၁၉၉၈ခုနှစ်မှာ ဖြန့်ချိတဲ့ Deep Impact ၊ ၂ဝဝ၂ခုနှစ်မှာ ဖြန့်ချိတဲ့ The Sum of All Fears ၊ ၂ဝဝ၃ခုနှစ်မှာ ဖြန့်ချိတဲ့ Bruce Almighty ၊ ၂ဝဝ၄ခုနှစ်မှာ ဖြန့်ချိတဲ့ Million Dollar Baby ၊ ၂ဝဝ၅ခုနှစ်မှာ ဖြန့်ချိတဲ့ The Dark Knight Trilogy ၊ ၂ဝဝ၉ခုနှစ်မှာ ဖြန့်ချိတဲ့ Invictus နဲ့ ၂ဝ၁၄ခုနှစ်မှာ ဖြန့်ချိတဲ့ Lucy ဇာတ်ကားတွေမှာ လူသိများလာပါတယ်။ မော်ဂန် ဖရီးမန်းရဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကို စာရင်းတွက်ပြရမယ်ဆိုရင် ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင်ပါပဲ။ Street Smart ၊ Driving Miss Daisy ၊ The Shawshank Redemption နဲ့ Invictus ဇာတ်လမ်းတွေမှာ အော်စကာဆန်ကာတင်ဝင်ခဲ့ပြီး Million Dollar Baby ဇာတ်ကားမှာ အကောင်းဆုံးဇာတ်ပို့ဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။
The Shawshank Redemption ဇာတ်ကား
မော်ဂန် ဖရီးမန်းရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို လေ့လာပြီး ဘာကိုအတုယူလို့ရသလဲဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့တွေ ကိစ္စတစ်ခုကို လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် ငါလုပ်တာ နောက်ကျနေပြီလား။ သူများတွေ လုပ်ပြီးကုန်ပါပြီလို့ တွေးတတ်ပါတယ်။ ဒီအတွေးက တကယ်တမ်းတော့ မှားယွင်းပါတယ်။ ကိုယ်ရူးသွပ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်မယ်ဆိုရင် အသက်အရွယ်ဆိုတာ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုပဲ ရှိတော့တာပါ။ အခုပဲ ကြည့် မော်ဂန် ဖရီးမန်း။ ၂၂နှစ်လောက်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲ ဝင်လာတာ ဘာလိုပဲလုပ်လုပ် မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ အသက် ၅ဝလောက်ကျမှာ ကမ္ဘာကျော်လာတာ။ အသက်ကြီးလာပြီဆိုပြီး သူ စိတ်ဓာတ်ကျမသွားဘူး။ ဆက်ကြိုးစားတယ်။ ၅ဝကျော် ၆ဝကျော် ၇ဝကျော်အထိ ဇာတ်ကားတွေ မနားမနေရိုက်လာတာ အော်စကာဆုတွေ တသီကြီးဆွတ်ခူးတုန်း။ ပြောချင်တာက ကိုယ်ရူးသွပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် နောက်ကျတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။
၂။ ကံလား ဇွဲလား။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုတည်းကို ကြည့်ပြီး ဒီလူဟာ ကံကောင်းလို့ အောင်မြင်တာလား၊ ဇွဲကောင်းလို့ အောင်မြင်တာလားဆိုတာ အလွယ်တကူခွဲခြားလို့ မရဘူး။ ကျရှုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ အောင်မြင်လာတဲ့သူဆိုတာ ကံကောင်းလို့ အောင်မြင်လာတယ်လို့ အလွယ်တကူ သက်မှတ်လို့ရပါတယ်။ အခု မော်ဂန် ဖရီးမန်းဆိုရင် အကြိမ်ကြိမ်ကျရှုံးဖူးတယ်။ စာရေးဖြစ်လိုက် အကသမားဖြစ်လိုက်နဲ့ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို လုပ်ချင်လွန်းလို့ စားဝတ်နေရေးအမျိုးမျိုး ဖြေရှင်းခဲ့ရတယ်။ သူ အောင်မြင်လာတာ ကံကောင်းလို့ မဟုတ်ဖူး။ “ငုတ်မိသဲတိုင် တက်နိုင်ဖျားရောက်” စိတ်ဓာတ်နဲ့ မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားခဲ့လို့။ လူတွေက ကြိုးစားလိုက်တိုင်း ကျရှုံးသွားရင် စိတ်ဓာတ်ကျတတ်ကြတယ်။ ဘယ်လောက်ကြာအောင် ကြိုးစားခဲ့သလဲ ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်။ မော်ဂန် ဖရီးမန်းကြိုးစားခဲ့တာ ၂၈နှစ်နော်။ အခုရေတွင်းတူး အခုရေကြည်သောက်ချင်လို့ မရဘူး။
၃။ စိတ်ခံစားမှုနောက် လိုက်ပါ။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ စစ်တပ်ထဲကို ဝင်သွားတယ်။ သူ စိတ်မပါဘူး။ ပြန်ထွက်တယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အားနာပြီး ကိုယ်စိတ်မပါတဲ့ အလုပ်ကို ကြိတ်မှိတ်မလုပ်လေနဲ့။ ကိုယ်ရူးသွပ်တဲ့ အလုပ်ကိုသာ စိတ်နှစ်ပြီး လုပ်ပါ။ ကိုယ် ဘာဝါသနာပါလဲ သိအောင်လုပ်။ ဝါသနာအတိုင်းသာ ကြိုးစားပါ။ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက ဇွဲကို အရင်းတည်၊ ရူးသွပ်တဲ့အလုပ်ကို ဘယ်လိုပဲကျရှုံးပါစေ ကြိမ်ဖန်များစွာ ကြိုးစားလုပ်မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှာသေချာပါတယ်။ ကဲ . . . မော်ဂန် ဖရီးမန်းကို အတူယူပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို စိတ်အားတက်ကြွသွားအောင် လက်တို့ပြောလိုက်ဦးနော်။
ကမ်ဘာကြျောမငျးသားကွီး မျောဂနျ ဖရီးမနျး (Morgan Freeman) ရဲ့ ဘဝခရီးကွမျး
မျောဂနျ ဖရီးမနျး (Morgan Freeman) ကို ၁၉၃၇ခုနှဈ ဇှနျလ (၁)ရကျနမှေ့ာ တနျးနကျဈ(ဈ)ပွညျနယျ (Tennessee) မနျးဖဈ(ဈ)မွို့ (Memphis) မှာ မှေးဖှားခဲ့တယျ။ ဆံပငျညှပျဆရာ မျောဂနျ ပျေါတာဖီး ဖရီးမနျး (Morgan Porterfield Freeman) နဲ့ ကြောငျးဆရာမ မမေီ အကျဒါ ဖရီးမနျး (Mayme Edna Freeman) တို့မှာ သားသမီး ၅ယောကျရှိတဲ့အနကျ မျောဂနျ ဖရီးမနျးကတော့ အငယျဆုံးသား ဖွဈပါတယျ။ အာဖရိကနျ-အမရေိကနျဖွဈတဲ့ မိဘနှဈပါးဟာ မျောဂနျ ဖရီးမနျးမှေးဖှားတဲ့အခြိနျမှာ လူဖွူလူမညျးခှဲခွားတဲ့ Jim Crow Laws ကွောငျ့ အလုပျအကိုငျအဆငျမပွတေော့တာနဲ့ ခြီကာဂိုပွညျနယျ (Chicago) နဲ့ မဈစဈစိပိပွညျနယျ (Mississippi) တှမှော ပွောငျးရှနေ့ထေိုငျရပါတယျ။ မိဘတှေ တဈနယျတကြေးမှာ အလုပျရှာထှကျနတေုနျးမှာ မျောဂနျ ဖရီးမနျးဟာ အဖှားဖွဈသူနဲ့ ခြာလီစတနျမွို့ (Charleston) မှာကနျြခဲ့ပါတယျ။ မျောဂနျ ဖရီးမနျး ၆နှဈအရှယျမှာ အဖှားဆုံးသှားပွီး မိခငျဖွဈသူမှာလညျး အရကျစှဲနတေဲ့ဖခငျနဲ့ အတူမနတေော့ပါဘူး။ သားအမိနှဈယောကျဟာ ဂရငျးဝုဒျမွို့ (Greenwood) မှာ အခွခေနြထေိုငျပွီး ရုနျးကနျခဲ့ရပါတယျ။
အနုပညာအလုပျကို ဝါသနာထုံလှတဲ့ မျောဂနျ ဖရီးမနျးဟာ ရုပျရှငျကွညျ့ဖို့ မုနျ့ဖိုးတှကေို စုခဲ့ရပါတယျ။ သူနှဈသကျခဲ့ရတဲ့ မငျးသားတှကေတော့ ဂယျရီ ကော့ပါး ဘီ (Gary Cooper B) ၊ စမနျဆာ ထရစေီ (Spencer Tracy) နဲ့ စဈဒနီ ပှိုကျတီးယား (Sidney Poitier) ဖွဈပွီး သူတို့သရုပျဆောငျထားတဲ့ ဇာတျကားတှကေို မလှတျတမျးအားပေးခဲ့ပါတယျ။ ဗီဇက သရုပျဆောငျဝါသနာရှိပမေယျ့ အခှငျ့အရေးမပေးတာကွောငျ့ အစှမျးမပွခဲ့ရပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အစှမျးပွဖို့အကွောငျးပျေါလာတာလညျး ရယျစရာတော့ ကောငျးပါသေးတယျ။ အထကျတနျးကြောငျးသားဘဝမှာ မျောဂနျ ဖရီးမနျးဟာ သူကွိုကျနတေဲ့ ကောငျမလေး ထိုငျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ကုလားထိုငျကို ဆှဲခမြိတဲ့အတှကျ အပွဈပေးတဲ့အနနေဲ့ ကြောငျးတှငျးသရုပျဆောငျပွိုငျပှဲကို ဝငျပွိုငျခိုငျးခဲ့ပါတယျ။ အံသွစရာကောငျးလောကျအောငျပဲ ၁၂နှဈအရှယျပဲရှိသေးတဲ့ ဖရီးမနျးဟာ ပထမဆုရရှိခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၅၅ခုနှဈ Broad Street High School ကနေ အထကျတနျးပညာပွီးတဲ့အခြိနျမှာ ဂကျြဆငျစတိတျ တက်ကသိုလျ (Jackson State University) ကနေ ပညာသငျဆုပေးခဲ့ပမေယျ့ အမရေိကနျလတေပျ (United States Air Forces) ထဲကို ဝငျရောကျသှားပွီး Automatic Tracking Radar Repairman အနနေဲ့ ၄နှဈကွာအောငျ စဈမှုထမျးခဲ့ပါတယျ။ သူတဈပါးအသကျကို ပဈခတျရတဲ့အလုပျကို စိတျမပါတော့ဘဲ စဈတပျကနေ ထှကျခဲ့ပါတယျ။
၁၉၅၉ခုနှဈမှာ ဟောလီးဝုဒျမှာ သရုပျဆောငျဖို့ လော့ဈ အိမျးဂလြိဈမွို့ (Los Angeles) ကို ပွောငျးရှနေ့ထေိုငျခဲ့ပါတယျ။ အနုပညာအလုပျကို တကျအားသရှလေု့ပျပမေယျ့ ဆေးစကျကရြာ အရုပျမထငျဖွဈနပွေီး မအောငျမွငျခဲ့ပါဘူး။ ထမငျးတဈလုတျ စားဖို့ခကျခဲလှနျးတဲ့အတှကျ နယူးယောကျမွို့ကို ပွောငျးရှရေ့တဲ့အပွငျ အိမျးဂလြိဈမွို့ကောလိပျ (Los Angeles City College) မှာ စာရေးနဲ့ 1964 New York World’s Fair မှာ အကသမား အလုပျတှကေိုလညျး လုပျကိုငျခဲ့ရပါတယျ။ သရုပျဆောငျအလုပျကို ပွနျလညျလုပျကိုငျပွီး အစောပိုငျးရိုကျကူးခဲ့တဲ့ ဇာတျကားတှမှောလညျး နာမညျကြျောကွားတာမြိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။
၁၉၈၇ခုနှဈမှာ ရိုကျကူးတဲ့ “Street Smart” ဇာတျကားမှာ ပရိသတျလကျခံလာပွီး အျောစကာဆုဆနျကာတငျ (Oscar Nomination) တောငျ ဝငျခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၅၉ခုနှဈ (၂၂နှ) ဈအရှယျမှာ သရုပျဆောငျအလုပျကို စတငျခဲ့ပမေယျ့ ဇာတျလမျးတှမှော မထငျမရှားပါဝငျရာကနေ (၂၈) နှဈကွာတဲ့အခြိနျ ၁၉၈၇ခုနှဈ ၅ဝနှဈအရှယျမှာ တဈကမ်ဘာလုံးလကျခံလာတာဖွဈပါတယျ။ ဒီနခေ့တျေမှာ မျောဂနျ ဖရီးမနျးဆိုတဲ့လူတဈယောကျကို ကမ်ဘာကြျောမငျးသားဖွဈဖို့ နှဈ၃ဝလောကျ ကွိုးစားခဲ့ရတယျဆိုရငျ ဘယျသူက ယုံမှာလဲ။ ၁၉၈၉ခုနှဈမှာ ဖွနျ့ခြိတဲ့ Glory ၊ ၁၉၉၁ခုနှဈမှာ ဖွနျ့ခြိတဲ့ Robin Hood: Prince of Thieves ၊ ၁၉၉၄ခုနှဈမှာ ဖွနျ့ခြိတဲ့ The Shawshank Redemption ၊ ၁၉၉၅ခုနှဈမှာ ဖွနျ့ခြိတဲ့ Seven ၊ ၁၉၉၈ခုနှဈမှာ ဖွနျ့ခြိတဲ့ Deep Impact ၊ ၂ဝဝ၂ခုနှဈမှာ ဖွနျ့ခြိတဲ့ The Sum of All Fears ၊ ၂ဝဝ၃ခုနှဈမှာ ဖွနျ့ခြိတဲ့ Bruce Almighty ၊ ၂ဝဝ၄ခုနှဈမှာ ဖွနျ့ခြိတဲ့ Million Dollar Baby ၊ ၂ဝဝ၅ခုနှဈမှာ ဖွနျ့ခြိတဲ့ The Dark Knight Trilogy ၊ ၂ဝဝ၉ခုနှဈမှာ ဖွနျ့ခြိတဲ့ Invictus နဲ့ ၂ဝ၁၄ခုနှဈမှာ ဖွနျ့ခြိတဲ့ Lucy ဇာတျကားတှမှော လူသိမြားလာပါတယျ။ မျောဂနျ ဖရီးမနျးရဲ့ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ဇာတျလမျးတှကေို စာရငျးတှကျပွရမယျဆိုရငျ ပွောမဆုံးပေါငျ တောသုံးတောငျပါပဲ။ Street Smart ၊ Driving Miss Daisy ၊ The Shawshank Redemption နဲ့ Invictus ဇာတျလမျးတှမှော အျောစကာဆနျကာတငျဝငျခဲ့ပွီး Million Dollar Baby ဇာတျကားမှာ အကောငျးဆုံးဇာတျပို့ဆု ရရှိခဲ့ပါတယျ။
The Shawshank Redemption ဇာတျကား
မျောဂနျ ဖရီးမနျးရဲ့ ဘဝဇာတျကွောငျးကို လလေ့ာပွီး ဘာကိုအတုယူလို့ရသလဲဆိုရငျ
ကြှနျတျောတို့တှေ ကိစ်စတဈခုကို လုပျလိုကျပွီဆိုရငျ ငါလုပျတာ နောကျကနြပွေီလား။ သူမြားတှေ လုပျပွီးကုနျပါပွီလို့ တှေးတတျပါတယျ။ ဒီအတှေးက တကယျတမျးတော့ မှားယှငျးပါတယျ။ ကိုယျရူးသှပျတဲ့ အလုပျတဈခုကို လုပျမယျဆိုရငျ အသကျအရှယျဆိုတာ ကိနျးဂဏနျးတဈခုပဲ ရှိတော့တာပါ။ အခုပဲ ကွညျ့ မျောဂနျ ဖရီးမနျး။ ၂၂နှဈလောကျကတညျးက အနုပညာလောကထဲ ဝငျလာတာ ဘာလိုပဲလုပျလုပျ မအောငျမွငျခဲ့ဘူး။ အသကျ ၅ဝလောကျကမြှာ ကမ်ဘာကြျောလာတာ။ အသကျကွီးလာပွီဆိုပွီး သူ စိတျဓာတျကမြသှားဘူး။ ဆကျကွိုးစားတယျ။ ၅ဝကြျော ၆ဝကြျော ၇ဝကြျောအထိ ဇာတျကားတှေ မနားမနရေိုကျလာတာ အျောစကာဆုတှေ တသီကွီးဆှတျခူးတုနျး။ ပွောခငျြတာက ကိုယျရူးသှပျတဲ့အလုပျကိုလုပျမယျဆိုရငျ နောကျကတြယျဆိုတာ မရှိဘူး။
၂။ ကံလား ဇှဲလား။
လူတဈယောကျရဲ့ အောငျမွငျမှုတဈခုတညျးကို ကွညျ့ပွီး ဒီလူဟာ ကံကောငျးလို့ အောငျမွငျတာလား၊ ဇှဲကောငျးလို့ အောငျမွငျတာလားဆိုတာ အလှယျတကူခှဲခွားလို့ မရဘူး။ ကရြှုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ အောငျမွငျလာတဲ့သူဆိုတာ ကံကောငျးလို့ အောငျမွငျလာတယျလို့ အလှယျတကူ သကျမှတျလို့ရပါတယျ။ အခု မျောဂနျ ဖရီးမနျးဆိုရငျ အကွိမျကွိမျကရြှုံးဖူးတယျ။ စာရေးဖွဈလိုကျ အကသမားဖွဈလိုကျနဲ့ သရုပျဆောငျအလုပျကို လုပျခငျြလှနျးလို့ စားဝတျနရေေးအမြိုးမြိုး ဖွရှေငျးခဲ့ရတယျ။ သူ အောငျမွငျလာတာ ကံကောငျးလို့ မဟုတျဖူး။ “ငုတျမိသဲတိုငျ တကျနိုငျဖြားရောကျ” စိတျဓာတျနဲ့ မဆုတျမနဈကွိုးစားခဲ့လို့။ လူတှကေ ကွိုးစားလိုကျတိုငျး ကရြှုံးသှားရငျ စိတျဓာတျကတြတျကွတယျ။ ဘယျလောကျကွာအောငျ ကွိုးစားခဲ့သလဲ ပွနျတှကျကွညျ့လိုကျ။ မျောဂနျ ဖရီးမနျးကွိုးစားခဲ့တာ ၂၈နှဈနျော။ အခုရတှေငျးတူး အခုရကွေညျသောကျခငျြလို့ မရဘူး။
၃။ စိတျခံစားမှုနောကျ လိုကျပါ။
ဆယျကြျောသကျအရှယျမှာ စဈတပျထဲကို ဝငျသှားတယျ။ သူ စိတျမပါဘူး။ ပွနျထှကျတယျ။ တဈစုံတဈယောကျကို အားနာပွီး ကိုယျစိတျမပါတဲ့ အလုပျကို ကွိတျမှိတျမလုပျလနေဲ့။ ကိုယျရူးသှပျတဲ့ အလုပျကိုသာ စိတျနှဈပွီး လုပျပါ။ ကိုယျ ဘာဝါသနာပါလဲ သိအောငျလုပျ။ ဝါသနာအတိုငျးသာ ကွိုးစားပါ။ အောငျမွငျပါလိမျ့မယျ။
နောကျဆုံးပွောခငျြတာက ဇှဲကို အရငျးတညျ၊ ရူးသှပျတဲ့အလုပျကို ဘယျလိုပဲကရြှုံးပါစေ ကွိမျဖနျမြားစှာ ကွိုးစားလုပျမယျဆိုရငျ အောငျမွငျမှာသခြောပါတယျ။ ကဲ . . . မျောဂနျ ဖရီးမနျးကို အတူယူပွီးတော့ သူငယျခငျြးတှကေို စိတျအားတကျကွှသှားအောငျ လကျတို့ပွောလိုကျဦးနျော။